सर्पको टोकाइ - विकिपिडिया
सर्पको डसाईको असर लामो समयपछि पनि डसेको ठाँउको मांसपेशी मरेर जाने, अंगहरू काम नलाग्ने हुने, स्नायुमा असर गरेर वा मष्तिस्कका रगतका नली फुटेर रगत बगी हातखुट्टा नचल्ने, मृगौलाले काम नगर्ने रूपमा देखिनसक्छ। 
विषालु सर्पको डसाईको अन्तिम र एकमात्र उपचार भनेको प्रतिविषको प्रयोग हो। र कुन विरामीलाई चलाउने र कुनलाई नचलाउने भन्ने एउटा महत्वपूर्ण र गाह्रों निर्णय हो। नेपालमा प्रयोग गरिने प्रतिविषले ४ प्रकारका विषालु सर्प (गोमन, करेत, रसेल्स भाइपर र सस्केल्ड भाइपर)को टोकाइमा काम गर्छ। यसको पनि आफ्नै खराब असरहरू छन्, त्यसैले विषको असर नदेखिएसम्म, विषालु सर्पले टोकेको यकिन नभएसम्म प्रतिविषको प्रयोग गरिदैंन। यो सर्पदंश उपचार केन्द्रहरूमा नि:शुल्क पाइन्छ। यसका खराब असरहरू धेरै हुने भएकोले, बढि महंगो हुने भएकोले र सीमित मात्रामा मात्र उपलब्द हुने भएकोले सर्पले टोक्यो भनेको आधारमा मात्रै लक्षणहरू नदेखिइकन प्रयोग गर्नुहुदैंन। यसले कसैकसैमा डरलाग्दो एलर्जीक कुप्रभाव गर्नसक्ने भएकोले यो दिनु अघि त्यो कुप्रभावबाट बचाउने स्टेरोइड औषधि तयार राख्नुपर्छ। बच्चालाई र वयस्कलाई प्रयोग गरिने प्रतिविषको मात्रा एउटै हुन्छ। 
↑ Snake Venom Detection Kit: Detection and Identification of Snake Venom, CSL Limited, २००७, मूलबाट २००८-०७-२१-मा सङ्ग्रहित, अभिगमन मिति २००९-११-२४, "The physical identification of Australian and Papua New Guinean snakes is notoriously unreliable. There is often marked colour variation between juvenile and adult snakes and wide size, shape and colour variation between snakes of the same species. Reliable snake identification requires expert knowledge of snake anatomy,asnake key and the physical handling of the snake" [dead link]
↑ White, Julian (२००६), Snakebite & Spiderbite: Management Guidelines, Adelaide: Department of Health, Government of South Australia, पृ: 1–71, आइएसबिएन 0730895513, अभिगमन मिति २००९-११-२४।
विकिमिडिया कमन्समा Snake bitesसम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन् ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=सर्पको_टोकाइ&oldid=487618" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १४:४१, २० अगस्त २०१५ मा परिवर्तन गरिएको थियो।